Faahfaahin Weerar Toorey Ah Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Dad Yahuud Ah Ay Ku Noqdeen. – Calamada.com
Faahfaahin Weerar Toorey Ah Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Dad Yahuud Ah Ay Ku Noqdeen.
calamada July 29, 2018 2 min read
Howlgal Mindiyayn ah oo uu fuliyay geesi Fislistiini ah ayaa ka dhacday xaafada cusub ee Aadam oo Yahuudu ka dhisatay meel ugu yaraan 3-KM Waqooy Bari uga magaalada Qudus, weerarka waxaa ku dhintay 1 ruux oo Yahuuda, iyadoona ay ku dhaawacmeen 2 kale, oo xaaladooda aad looga dayrinayo.
Ilo wareedyo caafimaad oo ka tirsan Yahuuda ayaa qaray in uu geeriyooday Hal ruux oo Yahuuda & dhaawaca Labo kale oo isla Yahuuda ah.
Wararka qaar ayaaa sheegaya in ruux Filistiini ah uu galay guri ku yaalla deegaanka wuxuuna weerarka ku bilaabay dadka Yauhuda oo xaafada joogay.
Wiilka howlgalka fuliyay oo da’diisu ahayd 17 sano ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Max’ed Dhaariq Yuusuf, wuxuuna ugu dambeyntii uu ku shahiiday gacanta Askarta Yahuuda oo ku dhex toogtay xaafada.
Ciidanka Yahuuda ayaa sidoo kale xiray dhamaan wadooyinka deegaanka uu weerarku ka dhacay , iyagona howlgallo baaritaano ah kula jarmaaday Tuulada Koobar ee dhacda Waqooyiga magaalada Ramallah halkaasi oo uu ka soo jeedo geesiga fuliyay weerarka, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka, balse waxay halkaasi ka bilowday iska hor’imaadyo u dhexayay Yahuuda & shacabka Filistiiniyiinta ah oo adeegsanaya dhagaxaanta & Bambooyinka wax guba.
Ciidanka Yahuuda ayaa xoog ku soo qafaashay Saddex ruux oo ka mid ah qoyska uu ka dhashay wiilka fuliyay weeraka Tooreynta ah, iyagoona sidoo kale dumiyay gurigii ay deganaayeen Qoyska uu ka dhashay Kaligii Duulkii Weerarka Fuliyay.
Waziirka difaaca Yahuuda Efeqdoor Libar Man ayaa weerarkasi k dib ku dhawaaqay mashruuc 400 oo guriyo cusub looga dhisayo deegaanka uu ka dhacay weerarka kaligii duulka ah ee dhaca Waqooyi Bariga magaalada Qudus, war uu ku soo qoray bartiisa Internetka ayuu Liber Man ku sheegay in iyaga oo ka jawaabaya weerarka mindiyaynta ah ee lagu qaaday dadka Yahuuda ay go’aansadeen inay sii kordhiyaan dhismooyinka ay ka wadaa n deegaanadaasi.
Previous: Xad Dil Qisaas Ah Oo Ka Dhacday Jubbooyinka.
Next: Shabaabul Mujaahidiin Oo La Wareegay Deegaan Istiraatiiji Ah.